Feature image for Macluumaad musiibooyinka dabiiciga ah
Greater MN keliya: 800-657-3602 Iimayl:consumer.protection@state.mn.us
Isla markiiba roobka duufaanka leh ka dib Isla markiiba ka dib roobka duufaanka, waxaa jira talloobin aasaasi kaas oo kuu qaadi kara jidka kabbashada. Shayga koowaad ee aad samaynaysaa waa in la soo waco shirkad acaymiskaaga hantida khusaysa (mulkiilayaasha guryaha, kiraystayaasha, ama baabuurta).
Wakaaladu Maamulka Gurmadka Federaalka (FEMA) Caawimada Masiibada 1-800-621-FEMA(1-800-621-3362)
Xafiiska degmadda Minnesota (Minnesota District Office): Minnesota District Office 330 Second Avenue South Suite 430 Minneapolis, MN Telefoonka: 612-370-2324 Intaa waxa dheer, waxaad ka eegi kartaa goobahan bulshadda ku salaysan wixii macluumaad ah. Jaamacadda Minnesota Lambarka Laynka Jawaabta : wixii macluumaad ah ee badbaadada cuntadda ah, nadiifinta caaryada, iyo tilmaanta go’aanada maaliyadeed ee masiibada ka dib. 1-800-854-1678 Shabakada Caawimada Beeralayda Minnesota (Minnesota Farmer Assistance Network) : MFAN waxay siisaa tilmaan ganacsiyo iyo dhaqaale oo aan kharash ku joogin beeralayda Minnesota iyo qoysaska beeraha ee dhibaatadu haysato.
1-877-898-MFAN (6326) 651-201-6326 (maxali) mfan.mda@state.mn.us Barnaamija Qaranka ee Caymiska Daadka (National Flood Insurance Program)
Jawaabta Masiibada Adeega Bulshadda ee Lutherenka (Lutheran Social Services Disaster Response) : 1-800-582-5260 LSS adeegyada waxaa ka mid ah maaraynta xaalada masiibada xiliga dheer, isku xidhka mutadawica, caawimada dib u dhiska, taageerada caafimaadka maskaxda, la talinta dhaqaalaha.
La shaqaynta qandaraasle
Hubso inay ruqsad ka haystaan Waaxda Shaqada iyo Warshadaha Minnesota ama haddii ay leeyihiin taariikh falalka anshaxa ah. Waydiiso tixraaca, lambarka telefoonka maxaliga ah iyo cinwaanka (maya sanduuqa Boosta) Cilm baadhid ku samee onlayn ah cabashooyinka iyo sida ganacsiga ay ugu jireen.
Iska ilaali qandaraaslayaasha isticmaala farsamooyinka iibka cadaadiska badan leh, u baahan lacag la sii qadimo, ama isku daya inay kugu dedejiyaan saxeexida “qiyaas” ama “oggolaanshaha” ka hor inta aanad isku deyin inaad go’aan ku gaadho shaqaalayntooda. Ka feejignow cida iska timaada adoon dalban albaabkaaga, ku timaada baabuur aan calaamad lahayn ama gaadhi qafilan, oo aan lahayn lambar ruqsada qandaraaslaha Minnesota.
Ka hor inta aanad saxeexin qandaraas, hubso inaad fahamto waxa aad saxeexayso oo u akhri warqadda si feejigan. Waydii su’aalaha haddii aanad fahmin shuruudaha.
Hubso in qandaraaska uu ku jiro faafahin shaqada oo kooban ah ee la qabanayo, faahfaahinta agabka la isticmaalayo, iyo wadarta qandaraaska qiimaha ama sida qiimaha loo xisaabin doono.
Xalinta dhibaato ama cabasho.
La xidhiidh Waaxda Shaqada iyo Warshadaha Summadoodaha Dhismaha iyo qaybta Adeegyada Fulinta Ruqsad siinta lambarkan (651) 284-5069 si loogala hadlo xaaladaada baadhaha bixin kara talo bixinta ku saabsan sida loo xaliyo khilaafaadka. Haddii khilaafaadka la xalili kari waayo, waxaad gudbin kartaa codsiga qoran ee baadhida rasmiga ah.
Kala xidhiidh qayba Summadaha Dhismaha iyo qaybta Adeegyada Fulinta Ruqsad siinta (Construction Codes and Licensing’s Enforcement Services )
Telefoonka: (651) 284-5069
Fagaska: (651) 284-5749
Sanduuqa Dib uu Helida lacagta Qandaraaslaha
Ujeedada Sanduuqa Dib uu Helida lacagta Qandaraaslaha waa in loo magdhabo macaamiisha khasaare ka soo gaadhay iyaddoo ay sababtay khiyaamada qandaraaslaha ruqsada haysta, khiyaamda ama dhaqanada daacad darrada ah, wareejinta maaliyada ama ku guul daraysiga in sidaas la sameeyo Qandaraaslayaasha ruqsada haystaa waxaa looga baahanahay inay bixiyaan khidmada maaliyada..
Wadarta qadarka lagu bixin karo lidka qandaraasla kasta oo ruqsad hastaa waa $75,000. Haddii shegashooyinka badan lagu buuxiyo lidka qandaraasle la mid ah waxaa loo qaybiyaa dhexda sheegtayaasha. Xaaladaasna, awood uma yeelan doontid inaad dib u hesho khasaarahaagii oo dhan. Si aad si wanaagsan naftaada ugu ilaaliso, codso inuu qandaraaslahaagu helo heshiiska ballanqaadka dhammaystirka qansaraaska ee masharuucaaga gaarka ah. Heshiiska ballanqaadka dhammaystirka qandaraaska waa uu siin doonaa heer gaar ah oo ilaalinta mashruucaaga ah.
Beddelka qalabka guriga
Qalabka lagu kulayliyo guriga, kulayliyayasha biyaha, mukayafka iyo qalabka kale ee guriga waxay u baahan karaan in la beddelo ama la sameeyo.
Badanka qalabka iyo saadka la xidhiidha iyo laymanka hawaynta ee ay waxyeeleeyeen biyahu waxay u baahan doonaan n la beddelo, ay ka mid yihiin qalabka lagu kulayliyo guriga iyo bayliyayaasha, kulayliyaasha biyaha, hawaynta soo celinta tamarka, iyo mukayafaa. Haddii ay jirto xaalad haddii biyahu ay gaadheen gaas ama qalabka korontada, qaybta waa inuu eegaa xirfad yaqaan. Ikhtiyaarada way kala duwanyihiin waxa ku saabsan beddelka ama dib u hagaajinta nidaamyada kulayliska biyahu qooyay, laakiin khabiirada badankoodu waxay ku taliyaan beddelka,
Tuumbooyinka qalabka lagu kulayliyo guriga waxay u muuqan karaan kuwa aan w axyeelo gaadhin, laakiin qoyaanka waxa uu ku ururi karaa meelaha hoose, oo keenaa dhibaatooyin suuragal ah oo caaryo leh. Qaybaha jiifka ah waa in la furaa oo si buuxda loo qaljiyaa. Xabagaynta saxda ah dhammaan kala goystada waxay ka qayb noqon kartaa dib isu xidh-xidhka.
Horumarinta yaraynta isticmaalka tamarta gurigaaga
Yaraynta tamarta waa mid ka mid ah asbaabaha ugu sareeya ee laga fekerayo markaad beddelayso qalab tamarta la xidhiidha. Had iyo heer raadi sumadda ENERGY STAR® (summada ay dowladdu taageerto ee yaraynta tamarta) oo hubi ENERGY STAR websaydka is barbardhiga u dhexeeya moodeelada kala duwan. Ku maalgelinta waxtarka waxay keeni doontaa biilasha gaasta iyo nalka iyo kharashka shaqada ee xiliga dheer.
Talo bixinta waxtarka ugu yar waxaa ka mid ah:
Qalabka lagu kulayliyo guriga Adeegsiga yaraynta shidaal ee sanadlaha ah (AFUE)qiimaynta ugu yaraan 95 boqolkiiba, kaydsi dheeraad ah oo leh xawaare kala duwan oo marawaxada matoorka ah..
Qalabka baylinta biyaha:AFUE ee ugu yaraan 85 boqolkiiba.
Mukayafka:Nisbada yaraynta Tamarka xiliga ku salaysan (SEER) ee ugu yaraan 14.
Kulayliska biyaha:Nismabda tamarta (EF) ee ugu yaraan 0.67 fee moodeelada kulayliska gaasta, 2.0 e e korontada;
kale:Qalab badna iyo qalab makaaniko guud ahaan laga helo qaybta hoose ee guriga -- ay ku jirto marwaxada soo celinka kulaylka, qalabka saara qoyaanka, dhar maydhaha, iyo tallaagada daboolka guudka ku leh --- waxay leeyihiin qiimayn la xidhiidha tamarta oo si feejigan loo barbar dhigayo ka hor inta aan wax la iibsan.
Dhiirigelinta beddelka qalabka
Shirkadaha qalabka badan sameeyaa waxay bixiyaan lacag celin qayb ah marka la iibsanyo qalabka aad u tamar kaydin sareeya. Lacag lagu sharfo qofka cashuurta bixiya iyo dhiirgelin kale ayaa jir karta alaabta kaydisa tamarta iyo nidamayada tamarta aan dhammaadka lahayn. Tusaale ahaan, ganacsigu waxa uu maamulaa Barnaamijka Dhiirigelinta lagu sameeyay Minnesota Solar ee korontada soolarkaiyo nidaamka qalabka soolarka. Booqo Kaydka Xogta ee Dhiirgelinta Gobolka ee Waktarka tamarta Dabiiciga in qoraaladii u dambeeyay ee lacag celinta iyo Dhiirigelinta gudaha Minnesota.
Waaxda Tamarta Maraykanku waxay bixisaa liisas ilo dadka degen iyo ganacsiyada eega dib u dhiska masiibada ka dib—“ Laga bilaabo Masiibo ilaa Guul: Ilaha dib u dhiska Cagaarka masiibadaka Dib”(pdf).
Waaxda Shaqada Minnesota iyo warshadaha waxay ruqsad siisaa dhisayaasha deegaanka, bedelayaasha dhismahiis hore, saqaf saarayaasha iyo rakibayaasha guryaha la isku rakibo. Si ay uga shaqeeyaan Minnesota, xirfad yaqaanadan waa inay ruqsad haysaan. Haddii aad shaqaalaysiiso qandaraasle, ma heli doontid Sanduuqa Dib uu Helida lacagta taas oo loo heli karo si loogu magdhabo macaamiisha ay dhibaato ka soo gaadhay khasaaraha iyaddoo ay sababtay khiyaamda ama dhaqanada daacad darrada ah.
Sanduuqa Dib u Helida lacagta Qandaraaslaha
Wadarta qadarka laga bixin karo lidka qandaraasla kasta oo ruqsad hasta waa $75,000. Haddii shegashooyinka badan lagu buuxiyo lidka qandaraasle la mid ah waxaa loo qaybiyaa dhexda sheegtayaasha. Xaaladaasna, awood uma yeelan doontid inaad dib u hesho khasaarahaagii oo dhan. Si aad si wanaagsan naftaada ugu ilaaliso, codso inuu qandaraaslahaagu helo heshiiska ballanqaadka dhammaystirka qandaraaska ee masharuucaaga gaarka ah. Heshiiska ballanqaadka dhammaystirka qandaraaska waa uu siin doonaa heer gaar ah oo ilaalinta mashruucaaga ah.
Hal khiyaar waa inaad lacag siiso baadhyaasha dad waynaha wixii caawimo ah ee qoritaanka khasaaraha. baadhiyaasha dad waynaha way ku mateli karaan adiga wada hadalada lala leeyahay shirkadaha caymiska baadhayaashooda iyo caadi ahaan waxaa la siiyaa boqolkiiba qayb heshiiska caymiska kama dambaysta ah. Lagaama baahna inaad la shaqayso baadhaha dad waynaha.
Ka hor inta aanad shaqaalysiin baadhaha dad waynaha
Hubi haddii ay ruqsad haystaan ama ay leeyihiin tallaabo anshax oo hore adoo isticmaalaya License Lookup anaga naga wac Xarunta Adeegyada Macmiilka 1-800-657-3602 (ka baxsan aaga metrooga) ama 651-539-1600.
Hel qandaraas qoran oo si cad u caddaynaya dhammaan khidmadaha.
Go’aan ka gaar haddii aad u malaynayo caawimda baadhaha inay kaa caawin doonto inaad ka soo kabbato in ku filan si aad u dheeli tirto khidmada.
Iska ilaali baadhayaasha kuwaas oo:
Sheegta inuu ka socda wakaalad dowladda ah
Ku adkaysta adeegyadooda inay waajib tahay
Isticmaala farsamooyinka cadaadiska ee iibka sareeya
Diida inay bixiyaan qandaraas qoran
Iska ilaalinta dhagarta iyo khiyaamada
Khiyaamoolayaashu waxay ku dul habsan doonaan aaga dhibtu saamaysay oo waxay garaaci albaabada. Qaar ka mid ah khiyaamoolayaashu waxay ku dul habsadaan aaga dhibtu saamaysay oo waxay garaacaan albaabada iyagoo bixinaya adeegyadooda. Fowdada masiibada, dhibanayaashu waxay rabi karaan si ay ugu celiyaan caadi oo dib u dhisaan Waxaad naftaada kaga ilaalin kartaa in lagu khiyaameeyo adigoo is ilaalinaya oo cilmi baadhaya sharikadaha aad ganacsiga la samayso.
Ka hubi caddaymaha saxda ah
Hubso inaad fahamto ereya qandaraaska ka hor saxeexida.
Wax kasta qoraal ku hel
Hel qiyaaso badan
Ku bixi kiridhit kaadh ama jeeg oo hana bixin ilaa markay shaqadu dhammaato mooyee
Weligaa ha saxeexin foomamka caymiska madhan